Malunga nathi - iZhejiang AHEM Auto Parts Co., Ltd.
Zhejiang AHEM Auto Izahlulo Co., Ltd. eyasekwa ngo-1993, i umenzi ngobuchule izinto auto elekhtrons. Ime eFengqiao Idolophu yasePakini, iZhuji, Zhejiang. Inkampani igubungela ummandla we-13,000m², inabasebenzi abangaphezu kwama-50 kwaye inamaqhina enkqubo yemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya ukugqibezela njengokufa, ukunyathela, isixhobo somatshini we-CNC, unyango lomhlaba kunye nomgca wokuhlangana.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava emveliso kunye nokuphucula inkqubo yokuvavanywa kwezixhobo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho kuqinisekisa ukuthembeka kunye nokuqina kwezinto ezijikija. Imveliso ekhokelayo isetyenzisiwe kwizityalo ezininzi eziphambili ze-injini e-China, kwaye iimveliso ezikhethekileyo zithunyelwa kuMzantsi-mpuma we-Asia, eMelika kuMbindi Mpuma, e-Afrika, njl.
Ukudala ubunjani obugqwesileyo ngumgaqo-nkqubo wethu wobulunga kunye nomgaqo oshishino phambi kobuso bemiceli mngeni kunye namathuba kushishino lweemoto, sikulungele ukusebenzisana nabarhwebi basekhaya nabangaphandle ukufezekisa izibonelelo ezifanayo kunye neemeko zokuphumelela.
Oluzenzekelayo Die Casting Workshop
Indawo yokusebenzela yeWelding